भुलेर पनि आफ्नो प्रेमीलाई कहिलै नभन्नुहोस् यी ५ कुराहरु | Samabesi Khabar
काठमाडौँ,१६ असोज ।
प्रेमी-प्रेमीकाको सम्बन्ध निकै नै गाढा हुन्छ। जीवनमा सँगै जिउने र मर्ने सम्मको बाचा गरेर एक-अर्कासँग रमाउने गर्छन्, प्रेमी-प्रेमीकाहरू तर एउटा सानो गल्ति या सानो कुरामा भएको मनमुटावले ती सबै बाचा कसमलाई पखालेर एक-अर्काबाट छुटिन समेत पुग्छन्। प्रेमी र प्रेमीकाबीच हुने केहि यस्ता कुराहरू हुन्छन्।
जसले दुबैको मनलाई एक-अर्काबाट टाढा राख्नु नै उचित ठान्छन् । प्रेमीका विषयमा प्रेमीकाले गर्ने सानो गल्ति र प्रेमीकाका विषयमा प्रेमीले गर्ने सानो गल्ति पनि उनीहरुको छुट्टिने कारण बन्न सक्छ ।
प्रेमी-प्रेमीकाबीच विश्वासको वातावरण राख्नका लागी दुवै एक-अर्कामा खुल्नु आवश्यक हुन्छ। हरेक कुरालाई शेयर गर्नुले सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँछ भन्ने हाम्रो धारणा छ तर केहि यस्ता कुराहरु पनि हुन्छन् जुन आफ्नो प्रेमीलाई भन्नु भन्दा जीवनभर मनमा नै राख्नु नै उचित हुन्छ ।
प्रेमीकाले प्रेमीलाई केही कुराहरु कहिल्यै नखोलेको राम्रो हुन्छ । प्रेमीकाले प्रेमीलाई भन्न नहुने केहि यस्ता कुराहरु छन्, जसले दुईबीचको सम्बन्धलाई कुनै असर गर्दैन ।
जान्नुहोस्, कस्तो कार्यक्रममा जाँदा कस्तो खालको चप्पल लगाउनु शोभायमान…
के तपाईंलाई आफ्नो पार्टनरको बानी मन पर्दैन ? यसरी बनाउनुहोस्…
जानौँ ती कुरा
१) आफ्ना साथीहरुको कुराहरूः प्रेमीकाले आफ्ना साथीहरुसँग गरिने कुराहरु तथा उनीहरूका सम्बन्धी कुराहरू आफ्नो प्रेमीलाई नभनेको राम्रो हुन्छ । आफ्ना साथीहरुले विश्वास गरेर भनेका कुराहरूलाई बाहिर नल्याउनु नै राम्रो हुन्छ।
२) तपाईको पासवर्डः तपाईले प्रयोग गर्ने इमेल, फेसबुक, तथा अन्य कुनै पासवर्डहरू प्रेमीलाई नभनेको नै राम्रो हुन्छ। उनीहरुलाई जति विश्वास र माया गरेपनि यस्ता कुराबाट उनीहरुलाई टाढा राख्नु नै राम्रो।
३) प्रेमीको परिवार मन नपर्ने कुराः तपाईको प्रेमीको परावारका बारेमा तपाईको धारणालाई नखुलाएको नै राम्रो हुन्छ। तपाईको प्रेमीको आमा तथा दिदीबहिनीका बिषयमा तपाईको धारणा सकेसम्म प्रेमीसँग नखोल्नु नै राम्रो हुन्छ।
४) तिम्रा साथीहरु मलाई मन पर्दैन: तपाइँका लागि प्रेमीले आफ्ना साथीहरु गुमाउन चाहँदैन र उसका आनीबानीलाई देखेर तपाइँमा रिस उठ्नसक्छ । तापनि आफ्नो सम्बन्धको भलाइका लागि चुप रहकै राम्रो हुन्छ।
५) पूर्व प्रेमी बारेः सकेसम्म आफ्ना पूर्व प्रेमीको बारेमा धेरै कुरा आफ्नो अहिलेको प्रेमीलाई नखुलाएको राम्रो। अहिलेको प्रेमीलाई यो विश्वास होस् की तपाईले आफ्नो पूर्व प्रेमीलाई पूर्ण रूपमा छोडोसक्नु भएको छ र उबाट टाढा नै रहन चाहनुहुन्छ।
किन लगाइन्छ कछुवा आकारको औंठी ? यस्तो छ कारण
आएन चाईनाको रेल
जीन्सको पाइन्ट लगाउन नदिएको भन्दै श्रीमतीले हालिन् श्रीमानविरुद्ध मुद्दा